Inzululwazi yeLizwi ngaphaya | Martech Zone
Xa ujonge ukusebenza nge Ilizwi ngaphezulu kwegcisa ngomyalezo wakho wokubamba, Ividiyo ecacisayo, urhwebo okanye nantoni na efuna umbalisi onamava, kubalulekile ukuba ukhethe umntu onetalente efanelekileyo kwiimfuno zakho ezithile. Ilizwi lobuchwephesha ngaphezulu kokuthetha nje amagama athile, ngapha koko, ungayenza ngokwakho! Sebenzisa ilizwi elinamava nelinezakhono ngaphezulu kwegcisa kubalulekile ekunxibelelaneni nomyalezo wakho ngendlela eyiyo.
Eyona ndlela ilungileyo, ngokoluvo lwam, ukufumana elona lizwi lilungileyo phezu komculi kukusebenzisa uGoogle omdala-okanye nayiphi na injini oyisebenzisayo oyisebenzisayo! Ngeengcali ezininzi ezinee-studio zazo, awukhawulelwanga ekufumaneni ilizwi ngaphezulu kwegcisa kwindawo yakho, ukuze ukwazi ukukhangela ude ufumane ulungelelwaniso olufanelekileyo lwegama lakho. Xa usenza eso sigqibo, ilizwi kwiwebhusayithi yegcisa libonelela ngobutyebi bolwazi ukukunceda, ukusuka kubungqina ukuya kwiisampulu zomsebenzi wabo. Ukuba abanazo iisampulu ezihambelana ncam noko ukufunayo, ungoyiki ukunxibelelana kwaye ubuze isampulu yesiko ukuze ikunike umbono ngakumbi ukuba ngaba balungile na. Uninzi lwamagcisa luya konwaba ukuphicothwa kwinxalenye yeskripthi sakho sangempela!
Njengoko isihloko sale posi sibonisiwe, kunye nokuba kukho ubugcisa kwi ilizwi lobungcali ngaphezulu, kukwakhona nesayensi kuyo, kwaye kulapho ubuchwephesha bokwenyani buya kwenza ukuba isikripthi sakho sikhanye.
Ilizwi ngaphaya kweCadence
Ukufumana cadence, ukunyuka kwesingqi kunye nokuwa kwentetho, ekunene kwilizwi ngaphezulu yinto enzima kakhulu ukufezekisa ukufunda kwiskripthi, ngaphandle kokuba umntu ofundayo uyingcali. Ngelixa sonke sinesidima sendalo kwaye sihamba ngelixa sithetha sincokola, beka iskripthi phambi kwabantu abaninzi kwaye amagama ayaqina kwaye awaqinisekanga.
Ilizwi eliyimpumelelo ngaphezulu kufuneka livakale lendalo ngelixa kwangaxeshanye ligcina ubude obufunekayo beskripthi. Ngelixa uninzi lwabantu lunokuthi lukhawuleze ngesikripthi okanye luvele amazwi abo, ilizwi elinobuchule ngaphezulu kwegcisa linamava kunye nezakhono ezifunekayo zokulinganisa isingqisho sentetho yabo ukuze ilingane ngokugqibeleleyo ngexesha elinikiweyo.
Ilizwi ngaphaya kweToni
The ithoni yezwi Isetyenziswe kwilizwi ngaphezulu kufuneka ihambelane kakuhle nophawu, imveliso kunye neskripthi, kwaye okona kubaluleke kakhulu, dibanisa ngendlela evakalayo yendalo. Nokuba inzima kwaye izolile ngomyalezo obambeleyo kwiziko lezonyango, ingxoxo kunye nomfana / intombazana engakwicala levidiyo echazayo ngeshishini, eyomeleleyo kunye nepunchy kwintengiso yemoto, okanye nayiphi na enye yeethoni zezwi, kufuneka kulawulwa kuyo yonke intsebenzo, engasoloko ilula.
Ithoni yelizwi ngaphezulu yinxalenye enkulu yokubonisa ishishini lakho kunye neemveliso zakho okanye iinkonzo kubathengi bakho nakubathengi abanokubakho, yenze loo nto iphosakeleyo, kwaye inokupela intlekele. Njengomzekelo, ukuba uvelisa isikhokelo sokuphumla kunye nethoni yelizwi lakho iyathengisa kwaye yomelele, ngekhe uphinde ufumane ishishini eliphindaphindayo!
Ilizwi ngaphaya kweVolumu
Nakuba Ivolumu yinto enokuthi, ewe, ihlengahlengiswe kwimveliso yasemva kwexesha, iseyinto ekufanele ukuba isondele kufezekiso ngexesha lokurekhodwa kwelizwi. Umthamo kufuneka ungxole ngokwaneleyo ukuba onke amagama kunye ne-nuance ithathwa yimic, kodwa ingangxoli kangangokuba nabani na osebenza kwiimveliso ezigqityiweyo uye wabethwa ngemigqomo yendlebe! Kuya kufuneka ihambelane kuyo yonke loo nto, ngelixa ivakala ngokugqibeleleyo ngokwendalo. Ngelixa kunokuhenda abantu abaninzi ukuba basebenzise ukonyuka kwevolumu ukugxininisa igama okanye ibinzana, ilizwi elinetalente ngaphezulu kwengcali liya kuyazi indlela yokusebenzisa imiba eyahlukeneyo yelizwi labo, njengekhadi okanye ithoni, ukwenza into efanayo. Imveliso egqityiweyo ayizukuvakala ukuba inengcali kakhulu 'ngamakhwazo' apha naphaya, ngapha koko.
Ilizwi ngaphaya kokuCacisa / ukuChaza
ingcaciso ibalulekile nakweyiphi na indlela yelizwi ngaphezulu, kuba umphulaphuli kufuneka aqonde onke amagama- ukuba ayingawo onke amagama ayebalulekile ukufumana umyalezo, ngekhe abekhona kwisikripthi. Umahluko phakathi kokuva intetho yezwi elibambeleyo nelisebenza ngokwasemzimbeni kuyacaca ukuba abaphulaphuli abakwazi ukubona umlomo welizwi lomlingisi ushukuma, eyinxalenye yendlela esiyiqonda ngayo intetho, ke le nkqubo kufuneka ibe yeyasemoyeni ngokupheleleyo.
Ukuba lula ukuyiqonda ngelixa uhlala uncokola ngokuqinisekileyo sisakhono, kwaye inzululwazi enelizwi ngaphezu kwamagcisa ichaphazeleka ngokukodwa. Thetha ngokukhawuleza kakhulu kwaye okunye ukucaca kulahlekile, kodwa ukugqithisa kakhulu kunye nentetho iyancipha.
Njengoko ubona, iinxalenye ezahlukeneyo zezwi ngaphezulu kwendlela zihlala zihamba, kwaye inzululwazi yokuzifaka zonke kunye kwingxelo evakalayo inokuba yinkohliso. Yenze kakuhle, nangona kunjalo, kwaye amandla elizwi ngaphezulu aya kuba nefuthe lokufumana umyalezo wakho!
tags: cadenceIcacileIsichazi magamaImveliso zemccoyithoniisandi selizwiilizwi ngaphayailizwi ngaphayaIvolumu
I-LIID: I-CRM ekrelekrele yokuNgena kwi-SmartPhone yakho
Sep 6, 2016 kwi-10: 40 AM
Owu mkhulu .. Ndifumene ulwazi olukhulu apha malunga nesayensi yelizwi ngaphezulu.. Kuba ndiyathanda ilizwi phezu kwabadlali kwaye ndibalandela kwasebuntwaneni bam. yiba lilizwi elidumileyo phezu komdlali.. Enkosi ngokwabelana ngolu lwazi lukhulu..